Arsenal Oo Rekoodhkii Abid Ugu Xumaa Premier League Loo Diwaan Galiyay Kadib Guuldaradii Newcastle United Ka Soo Gaadhay Iyo Qiimaynta Ciyaartoyda Labada Kooxood. – GOOL24.NET
Arsenal Oo Rekoodhkii Abid Ugu Xumaa Premier League Loo Diwaan Galiyay Kadib Guuldaradii Newcastle United Ka Soo Gaadhay Iyo Qiimaynta Ciyaartoyda Labada Kooxood.
Kooxda Arsenal ayaa loo diwaan galiyay rekoodhkii abid ugu xumaa ee horyaalka Premier league kadib markii ay guuldaro 2-1 ah kala soo laabtay kooxda Newcastle United. Newcastle United ayaa ka soo kabsatay gool ay Gunners ku hormartay waxayna ugu badashay laba gool iyada oo gool uu Lazacette dhaliyay uu Perez kansalay halka Ritchie uu daqiiqadii 68 aad dhaliyay goolka ay Magpies guuldarada ku baday Arsenal.
Guuldarada Arsenal ka soo gaadhay Newcastle United ayaa la micno ah in markii ugu horaysay tan iyo markii magaca Premier league la bixiyay ay Gunners soo gaadhay shan guuldaro oo xidhiidh ah ee kulamadii ay martida soo noqotay taas oo loogu diwaan galiyay rekoodh aad u liita.
Shanta guuldaro ee xidhiidhka ah ayaa ka soo bilawday guudlaradii 2-1 ka ahayd ee Arsenal ka soo gaadhay kooxda Bournemouth waxaana ugu xigtay guuldaradii Swansea City ka soo gaadhay waxaana u sii raacday guuldaradii Tottenham ee 2-1 ka ahayd halka Brighton ay noqotay kooxdii afraad ee Gunners iyada oo marti ah guuldaro soo baday.
Laakiin Newcastle United ayaa rekoodhkii ugu xumaa Arsene Wenger soo baday kadib markii ay guularo 2-1 ah u soo xanbaarisay laakiin kaasi ma aha rekoodhka kaliya ee liita ee maanta Arsenal loo diwaan galiyay balse waxaa jira kuwo kale oo aad u xun.
Haddii taariikh ahaan la eego Arsenal ayaa markii ugu horaysay shan guuldaro oo xidhiidh ahi iyada oo marti ah ku soo gaadhay horyaalka heerka kowaad ee England tan iyo December 1984 halka ay noqotay markii ugu horaysay ee Premier League ay rekoodhkan xun kooxdeeda u diwaan galisay.
Arsenal ayaa xili ciyaareedkan guuldaraysatay 11 kulan oo Premier League ah waana rekoodhkii ugu xumaa ee Arsene Wenger soo gaadhay kooxdiisa tan iyo xili ciyaareedkii 2005-06 markaas oo ay sidoo kale 11 kulan hal xili ciyaareed guuldaraysatay.
Arinta kale ee maanta Arsenal loo diwaan galiyay ayaa ah in ay ku jirto kala badhka kaalinta ugu hoosaysa Premier league iyo kaalinta ugu saraysa iyada oo 21 dhibcood ka hoosaysa Manchester City halka ay 21 dhibcood ka sarayso kaalinta ugu hoosaysa ee Premier league.
In koox bilawgii xili ciyaareedkan koobka ku tartamaysay ay haddaba 21 dhibcood ka hoosayso hogaamiyaasha Premier League ayaa muujinaysa sida Ay Gunners u noqotay koox la mid ah kooxaha meel dhexaadka ah ee horyaalka Premier League.
Badalkii: Darlow, Clark, Hayden, Manquillo
Badalkii: Ospina, Mertesacker, Kolasinac, Nelson